Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo u Jawaabay Xasan Kheyre - Awdinle Online
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo u Jawaabay Xasan Kheyre
Xasan Kheyre Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya oo Khudbad ka jeedinayey munaasabad lagu xusayay Maalinta Calanka Soomaaliya oo xalay lagu qabtay muqdisho ayaa ku baaqay midnimo iyo ilaalinta madax banaanida Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay in qof walba oo Soomaali ah muxaafid iyo mucaarad looga baahan yahay inay ka qeyb qaataan ilaalinta xaduudkeena Baddeena iyo madax banaaninadeeda,isla markaana taariikhda ay qori doonto, waxaana hadalka Ra’iisul Wasaare Kheyre waxaa ka jawaabay Hoggaamiyaha xisbiga Wadajir.
“Difaaca xudduudda dalkeenna waxay ka billaabataa askarta ajnabiga ah oo ammaanka Madaxtooyada laga wareejiyo, lana helo askari Soomaaliyeed oo gaar ka haya xadka dhul, cir iyo bad ee geyigeena” ayuu yiri Hoggaamiyaha xisbiga Wadajir.
“Soomaali isku dan ah, dareen isku mid ah ka qabta halista qaran, hiigsi iyo himilo mid ah leh ayaa dal difaacan karta. Taariikhduna waxay si togan u xusi doontaa siyaasigii taa ka mira dhaliya, waxayna si taban diiwaan u gelin doontaa siyaasiga ku hawlan horgelinta aragti haraadi ah oo qaran jabkeenna horseeday” ayuu hadalkiisa kusii daray
Hadalka siyaasi cabdiraxmna cabdishakuur ayaa ku soo aadaya ka dib markii xalay raiisul zaraha uu fariin u diray muxaafidka iyo mucaarad.
Previous articleDhagayso: Wasiirada Haweenka Soomaali Oo Soo Bandhigtay Hindise Sharciyeedka Naafada Qaran
Next articleRa’iisul Wasaare imran Khan oo dhexdhexaadinaya Iran iyo Sacuudiga